Reporter – Page 12 – TajaNepal
महेन्द्रपथमा लम्किँदै ओली
बहसNovember 21, 2018
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहतमा लग्दा विरोध गर्नेहरूको जित भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा जानु र नजानुको विभेद केही नभएको राष्ट्रिय…
भारतलाई भड्काएर चीनतिर लपक्कै
काठमाडौँ । नेकपाको राष्ट्रिय नीति के हो ? कुन दलको सरकारले सत्तामा रहँदा कस्तो नीति लियो ? दुई छिमेकीले नेपालका सत्ताधारीहरूप्रति कस्तो व्यवहार गर्दैछन् ? यसबारे न त पार्टीहरूबीचको सर्वदलीय बैठक बस्छ न त सरकारले…
नाच्न नजान्दा आँगनलाई दोष
 ईश्वरी वाग्ले दुई तिहाइकै बद्नाम गरेको नेकपालाई प्रशासनिक संयन्त्रको साथ नपाएको प्रसङ्ग उठाइने गरेको छ । मन्त्रीहरू स्वच्छ, इमानदार नहुँदा निजामती सेवालाई लगामबिनाको घोडा बनाइएको हो । दलीय आधारको कर्मचारी सङ्गठनका नेता आफ्नै स्वार्थमा…
कुलमान सकेनन् कर्मचारी सुधार्न
बहसNovember 20, 2018
बिजुली जडान गर्दा २० लाखसम्म घूस काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको केही महिनामै कुलमान घिसिङले वर्षौंदेखि मुलुकले झेल्दै आएको लोडसेडिङ हटाए । बेथिति र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई हटाएर लोडसेडिङसँगै प्राधिकरणको ‘व्यालेन्ससिट’ समेत नाफामा पु¥याए…
साँगामा कमल जैनको धन्दा यथावत्
सेना–प्रहरीकै हाकिमको साथ काठमाडौँ । भारतीय काँग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीलाई राजधानीका धार्मिकस्थल पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, मुक्तिनाथ र स्वयम्भूनाथको दर्शन गराएर मानसरोवर पठाएका कमल जैनको धन्दा चम्काउन मृतक बाबुलाई शिवजी र आमालाई पार्वती बनाएर भक्तजनहरूको दिमाग…
ढाँटछलमै बिते सरकारका नौ महिना
पार्टीको बद्नाम गर्न सुविधाभोगी नै लागे काठमाडौँ । देखिने र जनताका बीचमा पुग्ने कुनै काम नगरी नेकपा नेतृत्वको चुड्की र गफाडीको भरमा चलेको ओली सरकारले आज नौ महिना पूरा ग¥यो । अस्थिरताले देश गिजोलिएको बेला…
बहसNovember 14, 2018
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री खड्ग ओली आफू राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी भएको गर्व गर्छन् । तर उनी व्यापारमा भने राष्ट्रले लगानी गरेका संस्थाको हित सोच्दैन । उनले प्रधानमन्त्री भएपछि भारत र चीन जस्ता दुई छिमेकी देशको भ्रमण…
काठमाडौँ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, संवैधानिक प्रमुखहरू र कर्मचारी, सेना, प्रहरीसमेत विदेश भ्रमण गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । प्रजातन्त्र आएपछि रातो पासपोर्टमा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्री, सांसद, नेता र कर्मचारीमार्फत् साथै लगिएका…